लभ विना हामी काम गर्नै सक्दैनौँः मोडल सन्ध्या| Nepal Pati
शनिबार, भदौ ३०, २०७५
३ दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी सन्ध्या पौडेल व्यस्त मोडलको सूचीमा पर्छिन । कला क्षेत्रमा जमिरहेकी मोडल पौडेलसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
तीज कस्तो भयो ?
रमाइलो नै भयो । यसपाली पहिलो पटक ब्रत लिएँ । ब्रत लिँदाको अनुभव थाहा भयो ?
नर्मल एउटी महिलाको तीज र सेलेब्रेटीको तीजमा के फरक पाउनुभयो ?
नर्मल हुँदा त्यस्तो खास कार्यक्रममा निम्तो आउँदैन । सेलेब्रेटी भएपछि तजि स्पेशल कार्यक्रमहरूमा गइरहनुपर्छ । माया, सम्मान पाइन्छ । कार्यक्रममा सवै कलाकारहरूसँगको भेटघाट रमाइलो नै हुन्छ ।
यसपालिको तीजमा के माग्नुभयो ?
ब्रत बसेर भगवानको पूजा गरेर माग्दा केही पाइन्छ भन्ने लाग्दैन । ब्रत लिएपनि मैले केही मागिनँ । मेरो परिवारको स्वास्थ्यको कामना गरेँ । स्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा केही रहेनछ । मनको शान्ति हो पुरा गर्नु, ब्रत लिनु एउटा आशा हो ।
सुयोग्य वर चाहिँ माग्नुभएन ?
वर मागेर पाइन्नँ । यो त लेखेरै लिएर आएको हुन्छ जस्तो लाग्छ । आफुले मन पराको, माया गरेको मान्छे मागेर पाइदैन । यो त भगवानले जुराएर पठाएको हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
खासमा कस्तो श्रीमान पाइयोस भन्ने कामना हो तपाईंको ?
हरेक नारीको चाहना हुन्छ–माया गर्ने अनि केयर गर्ने र आफुलाई बुझ्ने श्रीमान होस । मनको भावना बुझ्ने, परिवारलाई बुझ्ने हुनुपर्छ ।
बिहे चाहिँ कहिले गर्ने ?
बिहे अवको २ वर्षजतिमा हुन्छ होला ।
उमेर घर्केला नि फेरि ?
धेरै हुँदैन । अहिले २८–३० वर्षमा गर्छन । सवै कुरा मिल्नुपर्छ बिहे गर्नलाई । सवैभन्दा पहिला त आफूलाई बुझ्ने भेटिनुप¥यो ।
कलाकारिता क्षेत्रमा जमिरहनुभएको छ । खासमा अहिलेसम्म कति वटा भिडियो गर्नुभयो ?
३ दर्जन भन्दा बढी भिडियो गरेँ ।
सवैभन्दा सजिलो र सवैभन्दा गाह्रो कुन–कुन भिडियो गर्दा भएको थियो ?
काम गर्न सजिलो त हुँदैन । जुनसुकै काम पनि गाह्रो नै हुन्छ । कामको क्रममा कहिले कता, कहिले कता जानुपर्ने हुन्छ । घाम, पानी, भोक, तिर्खा खप्नुपर्ने हुन्छ ।
आफैँलाई सवैभन्दा बढी मन परेको भिडियो कुन हो ?
‘ट्रीउ लभ’ नयाँ भिडियो हो मेरो ।
भिडियोहरूमा प्रायः लभका कथाबस्तु हुन्छन किन् ?
लभ विना हामी काम गर्नै सक्दैनौँ । लभ भनेको त बाच्न अनि बचाउन सिकाउने कुरा हो । भिडियोमा लभ देखिएन भने त खल्लो हुन्छ । जहाँ माया देखिन्छ, हेर्दै स्वीट देखिन्छ ।
त्यो भए लभ विनाको भिडियो नुन विनाको तरकारी जस्तै हुन्छ त ?
गीतसंगित बन्ने भनेकै धेरै मायाप्रितिकै हुन । देशभक्तिपूर्ण गीत देशको माया झल्काएर बनाएको हुन्छ । माया हरेक चीजमा समेटेरै बनाएको हुन्छ चाहे कुनै बस्तु होस वा मान्छे या देश ।
तपाईको विचारमा चाहिँ लभ के हो ?
लभ आफैँमा एउटा सुन्दर चीज हो । एकअर्काको भावना बुझ्ने, मनको फिलिङ्स हो । जुन भित्रि मनदेखि आफैँ निस्कने कुरा हो । गर्छु भनेर कोहीसँग लभ हुँदैन । यो त आफै हुने कुरा हो ।
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईलाई मन पर्ने र मन नपर्ने पक्ष के–के हुन ?
मनपर्ने भनेको कलाकार एउटा कलाले हुने कुरा हो । सवैको माया, सम्मान पाइन्छ । कलाकारलाई गर्ने व्यवहार नै छुट्टै हुन्छ ।
नराम्रो भनेको अहिले जो पनि कलाकार, निर्माता, निर्देशक छन् । कुनै दुःख परिश्रमविना आफूलाई राम्रो लाग्यो भने हिरोइन बनाउने गर्छन । याक्टिङ, डान्स नजानेको मान्छेलाई एक्कासी ल्याउँदा कला भएको मान्छेको कदर हुँदैन । आफ्नो र पैसा हेर्दैजाँदा अलिकति नराम्रो छाप परेको छ । नबुझी आउनेहरूले गर्दा अलिक नराम्रो भएको जस्तो लाग्छ । सकारात्मक भन्दा नकारात्मक मान्छेहरूको भीड बढेको छ ।
निर्माता, निर्देशकको इच्छा पुरा गरिदिए कलाकार बन्न पाइन्छ भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ नि ?
कलाकारिता क्षेत्रमा मनोरञ्जनका लागि मात्र आउनेले यस्तो गरेको हुन सक्छ । बुझेर, पढेर, सिकेर आउनुभएकाहरूले कामको कदर गर्नुहुन्छ । कला छ भने कसैको इच्छा पुरा गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।
यसमा दोष कसको ?
खेल्ने र खेलाउने दुवैको दोष छ । खेल्दिनँ भन्यो भने कसैले जवरजस्ती गर्दैन । दुवैको कारणले नराम्रो देखिन्छ ।
कलाकारितामा आउन चाहनेलाई तपाईको सुझाव के छ ?
यो क्षेत्रमा आउने भाइ, बहिनीहरूलाई मुख्य कुरा त कलाकारी क्षेत्रमा दुःख छ, सजिलो छैन । जव आफू सक्षम हुन्छौँ, आफुसँग खुवी र पैसा हुन जरुरी छ । सवैभन्दा पहिला बुझेर मात्र यो क्षेत्रमा आउनुहोला । यो क्षेत्रका मान्छेहरू को कस्ता छन् भन्ने जानकारी लिएर आउन अनुरोध गर्छु । बुझेर आउँदा काम गर्न, सिक्न सजिलो हुन्छ ।
मलाई मनका केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद । ढिलै भएपनि नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको शुभकामना । स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुस भन्न चाहन्छु ।
सन्ध्याको भिडियो हेर्नुहोस
पछिल्लो समय यूट्युव मार्फत विभिन्न प्रकृतिका टेलिश...
काठमाडौं । पछिल्लो समय कलाकारिताको क्षेत्रमा नयाँ-...
काठमाडौं । गायक बाबु बोगटी नयाँ गीत ‘नानु बाबु’ लि...
नेपाली माइकल ‘रेवन’काे सपना
काठमाडौं । मान्छेहरुका आ आफ्नै इच्छा र चाहानाहरु ह...